Maxay qaban doonaan guddiga cusub ee uu magacaabay M/weynaha Puntland? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay qaban doonaan guddiga cusub ee uu magacaabay M/weynaha Puntland?
Garoowe (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magacaabay guddi u qaabilsan dabagalka hirgelinta fursadaha maalgashi iyo shirkadaha maalgashi ee Puntland.
Guddigan oo ka kooban xubno ka tirsan Golaha wasiirrada Puntland, ayaa waxa uu madaxweynuha Puntland amray in ay kala shaqeeyaan Shirkadaha maalgashi iyo kuwa balanqaadyada la galay Puntland.
Afhayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Depraani ayaa ku tilmaamay ujeedka laga leeyahay magacaabista guddigan inay tahay fududeeynta fursadaha maalgashi ee ka jira Puntland.
Magacaabista guddigan ayaa ku soo beegmaya xilli uu shalay Madaxweyne Deni uu booqasho ku tegey magaalada Garacad, iyadoo safarkaasi ay ku wehliyeen shirkado ka qayb galay shirka maalgashiga ee todobaadkan ay martigalisay Puntland si ay u soo qiimeeyaan fursadaha maalgashi ee ka banaan magaalo xeebeedka Garacad.